Afrika: Eritreritra Fahavaratra (Hevitra Avy Amin’ny Renim-pianakaviana) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jona 2017 4:12 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, македонски, বাংলা, Español, English
(Fanamarihana: lahatsoratra efa nivoaka tamin'ny volana Jolay 2008 ity adika eto ity)
Firy taona no tokony hanomboka handrisika ny fangoraham-po sy hanome ho an'ny ankizy isika? Tohina i Isabella indray andro, raha tonga tao an-trano avy eny amin'ny toby ny zananivavy ary nilaza taminy fa renibe izy (Isabella).
Mazava fa nisy zavatra tsy arako tao, tsy tokony ho bevohoka izy ary niteraka tao amin'ny toby !! Tsy haiko vinavinaina hoe ahoana.
Eny, tsy niandry ela i Isabella mba ahafantatra mikasika izany renibe izany: niaraka tamin'ny namana, nanangan-jaza ny zanany vavy. “Miguel no anarany, avy ao amin'ny Repoblika Demaokratika ary mino fa Congo izy”. Rehefa fantany izany, dia tapa-kevitra hanohana ny zanany vavy izy. “zokiny 6 taona aho tamin'izany fotoana izany raha nanana nofinofy tahaka izany, tsy nisy olona mba nampahery ahy,” hoy izy.
Madanjalanja ny firesahana ny ara-nofo amin'ny zanany i Ashe.Selah, ary nanjary nitsotra tamin'ny zava-niainany manokana.
Manadino milaza ny marina isika indray andro. Tsy maintsy milaza ny marina isika, indrindra amin'ny resaka rehetra momba ny fahamarinana sy ny hoe tsy tonga lafatra i Mama sy Dada. Saingy nitondra ny saiko tamin'izany andro izany ity sehatra ity. Ivelan'ny tranon'i Neny, tany amin'ny kolejy. Ry ankizilahy, [amponga mihantona ve aho. Toa tsy afaka manonona hoe fifadiana ny ara-nofo. Tahaka ny tao anaty Soul Train teo amin'ny fafana birao mandahatra tarehintsoratra – adino ny “i” . Sady mampidi-doza no tsy mahasalama – ho an'ny fananahako sy ny fihetsehampoko ny fombako.
Ary, ho famaranana, niaraka tamin'ny hafaliana tao am-poko, nilaza aho hoe: zazavavy hafa (miaraka amin'ny ‘fro?) ho an'ny Tovovavy Miaraka Amin'ny ’Fro izany! Ary, satria nampandre izy, mety ho elaela vao hahazo lahatsoratra hafa avy aminy isika …
I probably will have time to blog, but I’d much rather just sit and gaze at my daughter, inhale her beautiful heavenly baby scent and just marvel at the goodness of God in creating us the way He has 🙂
Azo antoka fa hanana fotoana hanaovana bilaogy aho, saingy aleoko mipetraka sy mijery ny zanako vavy fotsiny, mankafy ny fofon'ny hatsaran'ny zanany ary mampifaly ahy amin'ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny fitondrany antsika 🙂
Hitahy ireo renim-pianakaviantsika anie Andriamanitra – eo am-pelatanany ny ho avin'ny taranaka; manoro hevitra azy ireo ny tenin'izy ireo; Hijery azy ireo ny mason'izy ireo; Hihazona azy ireo amin'ny fahamarinana ny vavak'izy ireo; Hiaro sy hihazona azy ireo anie ny Andriamanitr'izy ireo!